Sivy fitsipika mahomby ny fizarana. Blog XMailer.
Mailaka gazety — ny fomba lehibe mba hanambara ny vaovao, hitady mpanjifa vaovao sy re-hisarika ireo izay efa lasa ny mpanjifa. Fa raha tsy te-hividy ny nolazain'ny mpanao spam ianao, dia tokony hanaraka fitsipika tsotra vitsivitsy.
Inona no spam? 80% ny mailaka fifamoivoizana amin'ny Aterineto sy ny 20% ny fahaiza-miasa mahomby. Ny mahazatra, tsara atao gazety dia ho be kokoa ny mahomby. Fa na dia eo aza ny faniriana tsara ao ny misy foana ny mety mba ho afo fandiovana fampirimana Loto e-mail. Mba hisorohana izany, dia mila mandinika ny isan'ny mahay manavaka.
Noho izany, ny 9 fitsipika tsotra:
Dia tsy spam
Angataho ny mpandray alalana
Vaovao farany ny adiresy angona
Aza mampiasa ny fividianana fototra
Hitandrina ny fanamarinana ny maha ara-dalàna ny fototra
Aoka ny fahafahana serasera mivantana avy amin'ny gazety
Tsara sy pahendrena manao taratasy
Diniho ny fepetra takiana momba ny spam filter
Raha toa ka ny mailaka toa toy ny spam, fofona toy ny spam sy ny tsirony toy ny spam, dia tena azo inoana fa izany no izy. Tsy misy, tena marina. Ianao no farany nivoaka an-tserasera sy hahatakatra ny zavatra ianao dia mba atao (ohatra) dia ny spam. Ka aza manao izany, na dia fomba lehibe ny fakam-panahy. Na ahoana na ahoana ny nitsoka, fa izany ihany no hany fomba mba hanampy raha tsy misy fitarainana.
Ahoana no hisorohana ny fitarainana?
Raha ny marina, ny fandraisana ny fitarainana ombieny ombieny dia tsy azo ihodivirana. Tsy maintsy ho vonona amin ' ny zava-misy fa, na dia eo aza tanteraka ara-dalàna ny mandefa ireo taratasy ireo lisitry ny dimam-polo amby arivo ny olona sy ny fikarakarana ny toetra gazetinay, dia mbola hahazo iray na roa ny fitarainana. Ary izany no ambany indrindra. Indraindray, fa vao diso ny asa ny mpampiasa, izay noho izany dia te - "unsubscribe" avy amin'ny mailing list na ny manafina tsy ilaina ny mail.
Ny mpampiasa dia tena mora ao amin'ny Inbox nataony vitsivitsy kongona ary ataovy lisitra tsy ilaina mailaka ao amin'ny spam. Izy fotsiny clicks ny "Spam" bokotra eo amin'ny Inbox, fa tsy fantany izay "nandroba" dia toy izany no ho an'ny orinasa, ny fampiasana izany fotsiny ho toy ny fomba "unsubscribe" avy amin'ny gazety. Ary ny mahazo azy! Satria ny mail server dia ny fanakanana rehetra email avy amin'ny lohamilina, rehefa nandray ny ampy ny isan'ny fitarainana momba izany ny mpandefa.
Ny fomba tsotra indrindra dia ny fifandraisana ny orinasa tafiditra ao amin'ny newsletters matihanina, satria fantany avokoa ny fahalemenao ny dokam-barotra hafatra sy afaka miasa amin'ny mpandray, ary ny mail ny asa (izany hoe ny anay). Raha te-hanao ny mailaka amin'ny manokana na mikasa ny hanome izany fanompoana ny hafa ny fikambanana, dia ianao mankasitraka ny toro-hevitra tsotra.
Izy ireo dia mizara ho sokajy roa: miara-miasa amin'ny mpampiasa sy ny fiarovana avy amin'ny spam sivana.
Miara-miasa amin'ny mpampiasa
Inona no mampiavaka ny olon-tsotra mailaka avy amin'ny spam? Raha ny marina, ny famantarana iray ihany — ny fisian'ny ara-dalàna (izany hoe, ara-drariny) nanangona ny angona ny adiresy. Ny fahadisoana lehibe indrindra ao amin'ny famoriam-bola toy izany angona dia ny tsy fahampian'ny Express alalana avy amin'ny mpampiasa.
Ara-dalàna nanangona adiresy angona
Eo ambanin'ny lalàna amin'ity raharaha ity dia midika hoe iray ihany ny toe-javatra: ny mpandray ny mailaka dia ny misoratra anarana (izany hoe, Maneho mazava tsara ny faniriana hahazo izany).
Ny fampielezana ny dokam-barotra amin'ny alalan'ny tambajotra fifandraisan-davitra, tafiditra anatin'izany ny alalan ' ny fampiasana ny telefaonina, facsimile, finday fifandraisana, dia mahazo afa-tsy amin'ny fanekena mialoha ny famandrihana na ny addressee mba hahazoana ny dokam-barotra. Amin'ity tranga ity, ny dokam-barotra dia fantatra nozaraina tsy misy ny fanekena mialoha ny famandrihana na nanoratany ny dokam-barotra raha toa ka hita fa toy ny fanekena efa azo, (lalàna Federaly "ao Amin'ny dokam-barotra").
Raha toa ka manana fivarotana an-tserasera, dia manana ny mpampiasa fototra, izany hoe ireo olona no tsy mividy. Rehefa ny tsara indrindra fampielezan-kevitra na andian-fihenam-bidy, mazava ho azy, ny fakam-panahy avy hatrany manomboka ny fandefasana araka misy adiresy, fa na izany aza dia tsy maintsy mangataka alalana. Na dia ny mpandray ny mpanjifa, tsy mandefa azy ireo mailaka tsy nahazoana alalana. Rehefa ny olona hividy ny vokatra, fenoy ny fanontaniana sy manome fanazavana momba ny tenany, dia tena tsy manisa amin'ny marokoroko ny fampiasana ny mailbox ho fampahafantarana ny tanjona.
Tsy tokony hanoratra eny amin'ny e-mail adiresy avy amin'ny raharaham-barotra karatra, na fanontaniana. Izany vaovao izany dia tsy ho an'ny fizarana, ary ho an'ny tanjona hafa.
Ianao dia hahazo fanamafisana ny fahavononana handray ny mailaka
Manamafy ny famandrihana ka tsy nisy afaka sonia ho diso adiresy mailaka.
Hanatsarana ny fototra
Manana ny ara-dalàna fototra ny mpandray, fa ianao koa dia nahemotra gazety? Raha ny olona dia nanaiky ny handray taratasy roa taona lasa izay, ankehitriny gazety izany dia mahagaga, na dia infuriate – ny fahazoan-dalana dia mila manontany indray. Izany no antsoina hoe "fomba re-andraikitra." Izany dia manome anao ny porofo fa ny olona rehetra dia nanome alàlana ny gazety.
Tsy ny fividianana toby
Politika fitsipika XMailer dia mamela Anao hampiasa misy ny banky angona, anisan'izany ny fividianana, fa tsy ny fahazoan-dalana hidirana izany ho anao. Nividy na nanofa lisitra fotsiny ny fandaniam-bola, izay mifanohitra amin ' ny tolo-kevitra rehetra ny anti-spam fikambanana. Na dia amin'ny araka ny tokony ho fikarakarana ny mailing list ary ny zava-dehibe indrindra-kevitra fanomezana endrika ny fandaminana, ianao dia afaka hampihena ny loza sy ny fandrahonana.
Voalohany, ianao no mila mangataka ny mpandray ny fanekena handray ny gazetinay amin'ny mailaka — ohatra, amin'ny alalan'ny fandefasana azy kely taratasy milaza ny fomba nahazo ny adiresy, ary nanontany raha toa izy maniry ny hahazo avy aminao ny fampahafantarana ny hafatra. Nefa tsy izany no fanafody hanasitranana — ity ny lisitry ny mety mahazo ny olona hafa. Tany amin'ny farany, toy izany koa ny mpandray get isan'andro ny ranomasina ny tsy ilaina ny mailaka. Nisy fotoana, izy dia toy ny rehetra ireo dia mariky ny ilaina checkboxes sy handefa ny korontam. Izany dia hisy naniraka ny kaonty mailaka.
Faharoa, dia tsy hanao ny mailaka, tsy mahalala ny tantara ny lisitra ity (milaza, manao gazety momba ny fiara, ary ny lisitra mandeha motorcycling mpankafy). Ary ny fitantanan-draharaha momba ny paositra vidim-toby, na raha toa ny fifanarahana dia tanteraka ny "fotsy" — tsy ny tohan-kevitra. Raha toa ka miahiahy ny amin'ny spam, ianao dia afa-tsy ny fanamafisana ny mpampiasa manaiky ny gazety.
Tohizo ny fanamafisana ny fanekena ho an'ny gazety
Raha toa ka ny mpampiasa mandray ny spam tatitra avy amin'ny lafiny iray, ianao dia meloka mandra-voaporofo fa raha tsy izany. Rehefa dinihina tokoa, ny tena tanjona dia ny e-mail fanompoana dia ny hahatonga mailboxes ny mpanjifa madio. Dia toy izany no efa maro ny mpanjifa fa tena tsy misy fotoana mba hihaino ny fialan-tsiny sy ny fitarainana isaky ny iray amin'izy ireo.
Na izany aza, raha mbola ny mailaka lisitra ara-dalana nivory fototra, ary tsy misalasala mba hanaporofoana fa isaky ny fitoriana fotsiny ny fahadisoana – ny toerana dia mbola afaka ho voavonjy.
Ny tsara indrindra porofo ho notarafina ny fanontaniana nanao sonia ny mpanjifa sy ny teny "izaho te-handray ny tolotra amin'ny alalan'ny e-mail", na ny tahirin-kevitra momba ny fisoratana anarana (daty, ny anarana, ny adiresy IP) sy ny URL ny pejy izay izany no voarakitra.
Raha toa ka tsy afaka manamarina ny maha-ara-dalàna ny fomba fanangonana mailaka fototra, ny kokoa ny tantara dia tsy ho nanokatra.
Aoka ny fahafahana unsubscribe
Ho azo antoka ny fampiasana ny bokotra na ny rohy "Unsubscribe" isaky ny mailaka. Matetika izy ireo no hita ao amin'ny taratasy amin'ny endrika tsy misehoseho ny rohy — ary mila manao azy ireo ho hita sy mora — ny hevitra dia ny hanome mpampiasa tsara kokoa ny hanoto ny bokotra, noho ny bokotra "amin'ny Spam" ao amin'ny mail ny mpanjifa. Ohatra, isika dia tonga dia asio rohy mankany unsubscribe amin'ny lisitra mailaka ny mpanjifa sy ny tsy miankina tsapao ny tsy fahombiazana. Ny zava-dehibe indrindra dia ny mahatakatra fa ny fisian'ny bokotra, ny tombom-barotra dia tsy mihena, fa mitombo miaraka amin'ny fitokisana sy ny lazan'ny.
Tsy tokony hanery ny mpampiasa mba hiditra ny solonanarana sy ny tenimiafina raha toa ka ny toerana na ny asa fanompoana mitaky ny fisoratana anarana — ianao izany dia efa tena sarotra dia sarotra noho ny zava-misy ny mailaka, izay na izy te-serasera. Raha ny mpandray dia tsy hahatsiaro na tsy te-hiditra amin'ny antsipirihany ho an'ny teny, ny safidy mora indrindra ho azy dia, ankoatra izany, dia handefa taratasy ho amin'ny spam.
Raha toa ka tsy lava loatra mba handefa ny mitovy karazana newsletters na hafa mailaka, dia azo antoka fa ianao dia ho nitatitra toy ny mpanao spam. Fa resaka fotsiny ny fotoana.
Manao tsara tarehy
Eritrereto ny mpandray. Ho voaravaka tsara ny taratasy, izay mijery toy izany ny orinasa dia ampahafantarina ny mpampiasa fanta-daza sy azo antoka. Azonao atao ny mampiasa ny banky angona ny templates, misy ny tsara ao amin'ny XMailer. Hamaky bebe kokoa eto.
Cheap famolavolana, afa-po ny fahadisoana, gaudy famolavolana sy mamirapiratra ny endri-tsoratra loko (jereo ny fitsipiky ny mpitan-taratasy eto ambany) antoka be dia be ny fitarainana sy ny manaraka ny fandraràna.
Hisokatra. Ho foana ny toe-javatra ny fanapariahana misokatra. Hilaza ny olona ny fotoana sy ny zavatra be ianao dia ho fandefasana. Raha misy olona subscribes ny vaovao isan-kerinandro izahay dia efa tany ankoatra ny mandefa isaky ny efatra andro ny dokam-barotra na hafatra momba ny fisondrotana. Ianao dia avy hatrany hivadika ho mpanao spam sy ny mpandainga. Na izany aza, na dia, raha ny gazety dia mahaliana ho an'ny olombelona, dia mbola tsy manaiky ny taratasy, tia kokoa ny mamaky ny vaovao ao amin'ny toerana hafa. Tokony ho takatsika mazava tsara ny maha samy hafa ny information taratasy (vaovao), sy ny lehibe nametrahana ny asa, ny dokam-barotra momba ny entana. Azo inoana fa, ianao dia mila mamorona ny roa samy hafa ny lisitry ny adiresy – ny iray ho an'ny vaovao, iray hafa ho an'ny dokam-barotra.
Eo ho eo, noho ny spam sivana, momba ny 10-20% ny mailaka rehetra hanjavona ao amin'ny e-mail fifamoivoizana. Ary izany rehetra izany dia amin'ny alalan'ny fahadisoan'ny overzealous spam sivana. Tsy tokony ho mampidi-doza ny mpanao spam fa ny taratasy tsy tonga ny addressees. Na dia ireo orinasa izay mahatonga ny fitsinjarana tena ara-dalàna, miaraka amin'ny fahazoan-dalana sy ny fangatahan ' ny nanoratany punctually "mahazo izany mafana".
Indrisy, haingana sy tsotra ny vahaolana amin'ny olana tsy misy. Mba hisorohana ny sivana, dia ilaina ny mahatakatra ny natiora, mba hahatakatra ny fomba miasa. Ary izany dingana izany dia ela ary hentitra.
E-mail dia ny tena lehibe lisitry ny fepetra, izay miompana sivana mba hanala tratran'ny mpanara mailaka. Tafiditra ao amin'ny lisitra ity eo amin'ny toerana voalohany "amin'ny spam" ny andian-teny. Anisan'izany, ohatra: "FAMPITANDREMANA, MAFANA!!!", "TSINDRIO ETO ARY IANAO DIA MANANA IRAY TAPITRISA DOLARA!". Manaiky ny iray amin ' ireo andian-teny (na ny tena mitovy izany), mametraka robot miverimberina ny taratasy. Misy fepetra hanome hevitra bebe kokoa, sasany tsy. Ohatra, ny santionana famakafakana ny fepetra avy SpamAssassin, ny malaza indrindra dia ny spam sivana eto amin'izao tontolo izao.
Ny taratasy dia ho apetraka any amin'ny spam raha:
milaza fandresena goavana vola (0.2 hevitra)
nahoana karama kokoa? (1.25 teboka)
ny refund na inona na inona (2 hevitra)
misy hafatra momba ny sasany maika olana izay mila ny saina tanteraka (2.9 hevitra)
manolotra cheap antoka na ny refinancing (3 points)
milaza ny zava-miafina ny amin'ny fahombiazana tsy (2.4 hevitra)
Raha toa ka ny taratasy maromaro ahitana ny spam ambony iray tokonam-baravarana, dia esorina. Isaky ny mpizara ny mpitantana mametraka ny fisotroana isam-batan'olona. Raha toa ianao ka efa leo amin'ny tratran'ny mpanara mailaka lisitry, ny tokonam-baravarana no napetraka ho tena ambany dia ambany. Saika ny rehetra ny serasera ao amin'ity tranga ity, dia mandehana any amin'ny korontam.
Ny voalaza etsy ambony lisitry ny mason-tsivana ho an'ny famaritana ny spam dia tsy mitsaha-mitombo, sivana azy ireo mba mampifanaraka ny fiovana sy ny vaovao spammers ' ny tricks. Ny lisitra dia havaozina isaky ny mpampiasa potsitra "Izany dia amin'ny spam" ao amin'ny Inbox. Ny Spam sivana atao mihitsy aza ny synchronize sy mizara traikefa an-tserasera.
Famantarana ny spam
Inona no mety ho ny fitsipika fahadisoana sy ny fomba mba hisorohana azy ireny? Toy ny spam, ny antispam rafitra dia manaiky ihany koa ny famantarana ireto:
Tsy spam andian-teny toy ny "Tsindrio eto!", "Nahazo tapitrisa isaky ny iray minitra!"
tsoraka hevitra ao amin'ny lohapejy sy ao amin'ny hafatra vatana
maika ny "CAPS LOCK" (Eny, Eny :)
ny loko ny andalana sasany, indrindra fa mena, maitso (Oh yeah!)
Mampiasa lehibe iray sary fa tsy ny hafatra an-taratasy, raha ny sary dia tsy niaraka tamin'ny kely dia kely be ny lahatsoratra, ny email no voafafa ihany koa toy ny spam
Ny fampiasana ny teny hoe "Fitsapana", "Miarahaba", "Fitsapana", "Fitsapana" ao ny foto-kevitra tsipika — izany fahadisoana dia nataon ' ireo izay mandany ny testmail ao anatiny ny orinasa mailaka
Mandefa hafatra tokana ho maro ireo mpandray toy izany koa ao anatin'ny fikambanana amin'ny any ivelany adiresy dia sarotra iray izay tsy hiatrika no postal service. Izany rehetra izany dia miankina amin'ny ny mpitantana ny rafitra ny orinasa
Meloka fandrafetana — tsy mandika ny lahatsoratra avy amin'ny Microsoft Word mivantana an-mailaka andalan-Teny ao amin'ny rafitra HTML tsy haseho tsara. Indrindra indrindra, izany dia mihatra farango sosona, teny malagasy. Azonao atao ny mampiasa rehefa mandefa mail safidy tsotra amin'ny fandrafetana (e.g., Gmail) — ara-dalàna ny HTML dreninao. Na izany aza, amin'io tranga io ihany koa ny very rehetra ny fandrafetana sy ny, ny zava-dehibe indrindra, ny rohy
Fandefasana be loatra ny mailaka isan'andro. Ny ankamaroan'ny asa mailaka tsy mamela mba handefa bebe kokoa noho ny 200 mailaka isan'andro (miaraka amin'ny haingana ny fandefasana hatramin'ny 50 000 ny adiresy mety ho tara :). Ankoatra izany, raha toa ianao hanofa lohamilina avy amin'ny nozaraina fampiantranoana, dia afaka mora foana mankarary ny kaonty amin'ny fahitana fotsiny ny mahazatra ny fifamoivoizana misamboaravoara. Raha toa ka efa vita fanoloran-tena ny asa fanompoana, ny mpitantana ny miaramila mba hamaly afa-tsy ny fitarainana.
Ny mahalala-fomba — dia mihazakazaka ny taratasy rehetra nialoha ny fandefasana hafatra amin'ny alalan'ny SpamAssassin, nanamarina ny mari-pahaizana momba ny "spamboti". Raha toa ka mihoatra iray tokonam-baravarana, ny adiresy mailaka sy hanova ny gazety. Amin'ny ho avy dia mikasa ny hampihatra izany asa fanompoana XMailer, dia tolo-kevitra ho namoaka mivantana amin'ny downloading ny taratasy.
Ahoana no mba hahafantatra raha toa ka ny mailaka ao amin'ny "Fako" na "Sendra"? Misy fomba maro — antontan'isa fanadihadiana ny zavatra hitan'ny taratasy na SMTP rakitsoratra, fa ny olon-tsotra mpampiasa raha tsy misy ny mampiasa ny manokana ny rindrambaiko no azo alaina. Izany no tombontsoa manokana ny asa manokana. Amin'izao fotoana izao izay azo atao amin'ny XMailer amin'ny dingana mikatona beta fitiliana, tsy ela dia manantena ny famoahana ny vaovao fampiharana ny dikan-teny.